Picsart Photo Editor အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
18.7.3 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（51.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Picsart Photo Editor: Pic, Video & Collage Maker
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဖန်တီးသူသန်း 150 ကျော်ရှိသည့် Picsart အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ Picsart Photo Editor နှင့် Video Editor ကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည့်ဘဝသို့ယူဆောင်လာနိုင်သည်။ Professional-level collages များကိုပြုလုပ်ရန်, ဒီဇိုင်းနှင့်စတစ်ကာများကိုထည့်သွင်းပါ, နောက်ခံများကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပစ်ပါ, နောက်ခံအခြေအနေများကိုဖယ်ရှားပါ, Picsart သည်သင်၏ Go-to All-al-in-in-and-and-let-and anditor သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုပေးရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများအားလုံးပါ0င်သည်။
•ရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မလိုလားအပ်သောအရာများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပုံများကိုသုံးပါသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ပါ။ •ဒီဇိုင်နာဖောင့် 200 နှင့်အတူစာသားထည့်ပါ။ ဆံပင်အရောင် changer, makeup စတစ်ကာများနှင့်အခြားများနှင့်အတူ Blur နောက်ခံနှင့်အတူ Blur နောက်ခံနှင့်အတူ blur နောက်ခံနှင့်အတူ blur နောက်ခံနှင့်အတူ blur နောက်ခံနှင့်အတူ flip & coper များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကို ဖန်တီး. သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများကိုဖန်တီးပါ။
•ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာကိုတေးဂီတနှင့်အတူဗီဒီယိုများ ဖန်တီး. တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ IG Stores, Tiktoks & Reels ကိုနောက်အဆင့်သို့ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာဂီတစာကြည့်တိုက်ကို အသုံးပြု. သင်၏ဗွီဒီယိုများကိုတေးဂီတ•ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာတွင်ကြည့်ရှုပြီးသောဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အချိုးအစားနှင့်အချိုးအစားကိုကြည့်ပါ။ •ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာတွင်ကြည့်ပါ။ ဗွီဒီယိုများကိုရောနှောရန်အနုပညာဗွီဒီယိုပေါင်းစည်းမှုဗွီဒီယိုများနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း•ဆလိုက်ရှိုးထုတ်လုပ်သူကိုအသုံးပြုပြီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း။ •ဗီဒီယို collage အတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးအချိန်လေးများကိုထည့်ပါ။
-trend သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပုံများနှင့်အတူဓာတ်ပုံ collages brilts •ဓာတ်ပုံပကတိ collage collage, freestyle collage collage နှင့် frames များကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ •ကျွန်ုပ်တို့၏ Meme Generator နှင့် Phote Kings နှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ •ဇာတ်လမ်းထုတ်လုပ်သူနှင့်အဆင့်ကိုသုံးပါ သင်၏ Instagram Game ကိုဇာတ်လမ်းတင်းပလိတ်များဖြင့်ဖွင့်ပါ။
Picsart စတစ်ကာသန်း 60 ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ edits
•မည်သည့်စတစ်ကာကိုမဆိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။ •သင်၏ကိုယ်ပိုင် cliparts လုပ်ပါ။ •သင်၏ကိုယ်ပိုင် cliparts လုပ်ပါ။
Photo Effects & filter များ
လူကြိုက်များပုံကြမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပုံတူများနှင့်အတူပတ္တူအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအနုပညာလက်ရာများအဖြစ် pravistist ကိုဖွင့်ခြင်းအနုပညာကို dropping actping စတစ်ကာများနှင့်အတူယိုယွင်းစေ & ရောနှော mode ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။ Agic Effects
ကိုအသုံးပြုပါ။ •စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သောစုတ်တံများ, အလွှာဆွဲခြင်းကိရိယာများဖြင့် Picsart Draw ကိုသုံးပါ။ •ခြစ်ရာမှအနုပညာနှင့်သရုပ်ဖော်ပုံများကိုဖန်တီးရန်ပတ္တူကွက်တစ်ခုဖြင့်စတင်ပါ။ • Doodle အနုပညာနှင့်ကစားပါ။ •နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် scribr
ပုတ်၏။ Extressive ကိုလွယ်ကူသောအဆင့်များဖြင့်တည်းဖြတ်သည့်အချိန်ကိုဖြတ်တောက်ပါ။ •တူညီသောပုံစံရှိရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ပါ။
•ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖန်တီးခြင်းတို့ဖြင့်သင်၏ ig-triend နှင့်တသမတ်တည်းကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်တသမတ်တည်းကိုစောင့်ရှောက်ပါ။
b> ။ ကြော်ငြာတည်းဖြတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ထိပ်ဆုံးအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုရယူပါ။
သင်၏ Picsart ရွှေရောင်အသင်း0င်မှုကိုအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်အမည်ခံကြေးပေးသွင်းခကျသင့်သည်။ သင်၏ရွှေရောင်စာရင်းပေးသွင်းမှုသည်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုလက်ရှိကာလမတိုင်မီအနည်းဆုံး 24 နာရီပိတ်ထားခြင်းမရှိပါကအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ အကယ်. သင်၏စာရင်းသွင်းခြင်းသည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလျှော့စျေးမဆို0င်ပါကအထူးလျှော့စျေးသည်လက်ရှိကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင်လျှော့စျေးသက်တမ်းကုန်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏အသင်း0င်မှုကိုစီမံရန် & အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးရန်သင်၏ Google Play အကောင့်သို့သွားပါ။0ယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုသည့်အခါသင်၏ Google Play အကောင့်ကိုစွဲချက်တင်ပါလိမ့်မည်။
ads အကြောင်းကြော်ငြာများ - https://picsart.com/ Privacy- မူဝါဒ # အတိုးနှုန်း
ဘာအသစ်လဲ Picsart Photo Editor: Pic, Video & Collage Maker 18.7.3
PicsArt Photo Editor Pic, Video & Collage Maker v16.5.3 [Gold] [Latest]
PicsArt Photo Editor Pic, Video & Collage Maker v16.6.2 [GOLD]
PicsArt Photo Editor: Pic, Video & Collage Maker v12.3.6 (Unlocked) For Android Download
AKO game youtube
SKB ther gyi Ko soe naing
Kyawkyaw7Kyaw kyaw Naing